Cadayashooyin Bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
En Laabta Sawirka Waxay nooga tagayaan ilo aad u wanaagsan oo loogu talagalay dib-u-hagaajinta sawir iyo sawir. Waxaa jira laba xirmo oo ah Burush Buroshka Photoshop Gabi ahaanba Bilaash ah jilayaashaaga ama si aad u siiso taabasho qurux badan qurxinta sawir-celintaada sawir qaadista ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Cadayashooyin Bilaash ah oo Bilaash ah
Haddii burushyada loogu talagalay baarkooda ay lacag la’aan yihiin, haddaba maxay uga qaadanayaan 20 euro inay hoos ugu dhigaan?
Mid kasta oo ka mid ah xiriiriyeyaasha soo dejinta waxaad leedahay laba ikhtiyaar oo aad ku soo dejiso xirmada burushka, midna mid la bixiyo iyo mid bilaash ah… hubi inaad dooratay midka bilaashka ah.
Waad salaaman tahay! khayraad badan oo soo rar! mahadsanid !!! Runtu waxay tahay anigu uma maleynayo inay wax isku dhafan yihiin sida ay kor ku yiraahdaan ... iyo marka lagu daro soo degsashada iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin, waa bilaash oo aad ayey faa'iido u leeyihiin!
ereyada nacasnimada ah ...
Waad ku mahadsan tahay waxaan raadinayay buraashyo wanaagsan oo indhaha ah waxaanan u imid golahan, waan isku dayi doonaa oo faallo ayaan ka bixin doonaa, waana bilaash wax lacag ah oo aan ku bixiyay gabi ahaanba goobtan ayaan ku soo dejinayaa.
Aniguba waan ku raacsanahay Ana .. maxaa yeelay waxay dhahaan way xor yihiin markay bixiyaan mid udhaxeeya 20 euro .. cawska ugu dambeeya .. marhore ayaan cadeeyay marar badan… inay tahay mida xorta ah
Xaqiiqdii xiriirka labaad ayaa la soo dejiyaa laakiin ma jiro qaab 1 ah, sidaa darteed waxay raacaysaa haddii aan xiiseyneyno, waa inaan ku soo dejisannaa qaabka ugu sarreeya !! anyway waad ku mahadsantahay isku dayga ... Salaan
Ku jawaab Losena
Ma fahmin sababta ay u yiraahdaan xor ma ahan horey ayaan u soo dejiyey 2 waa
Mahadsanidiin wax badan oo hal abuur leh khadka tooska ah burushkan ayaa wax badan iga caawiyay hehe
Sidee loogala soo degaa ????
oiie horeyba waan u soo dajistay barnaamijka tabs-ka laakiin ma aqaano sida loo sameeyo ka soo muuqashada sawir-qaadaha .. miyaad i dooni kartaa ?????
Ma soo dejisan karo iyaga ma aqaano waxa dhacaya !!!!
Horay ayey u ahayd inay cadaabta galaan baalashaas nacladaa xun ayaa qurux badan laakiin ma aqaano sida loo soo dajiyo !!!
Soo dejiso xiriirada
Xirmada 2 http://depositfiles.com/en/files/ei4sjd3yo
Xiriirinta soo dejinta ee xirmada 1 waxay umuuqataa inay jabtay ... Waxaan isku dayi doonaa inaan dib u helo.